Ungazi njani ukuba iqabane lakho likwangumhlobo wakho osenyongweni | Bezzia
Ungazi njani ukuba iqabane lakho likwangumhlobo wakho osenyongweni
UMaria Jose Roldan | 11/05/2022 22:32 | Ubudlelwane
Ingqikelelo yeqabane lomphefumlo yinto enqwenelwa ngumntu kubo bonke ubomi bakhe. Ukukwazi ukunxibelelana nomntu kwinqanaba leemvakalelo kunye nokuchaphazeleka kunye nokuba nokuhambelana okuyinyani yinto eqondwa njengothando lokwenyani. Ukufumana iqabane libe ngumhlobo wakho osenyongweni yinto engenzekiyo kubo bonke ubudlelwane. Le nyaniso ingundoqo xa ikhonkco elenziwe lihlala ixesha elide.
Kwinqaku elilandelayo sikunika uthotho izitshixo ukwazi ukuba iqabane lakho kwakhona umhlobo wakho osenyongweni.
Izitshixo zokwazi ukuba iqabane lakho ngumhlobo wakho osenyongweni
Kukho uluhlu lweempawu okanye iimpawu ezinokubonisa ukuba isibini sikwangoyena mhlobo usenyongweni:
Uthando olusekelwe kubuhlobo ludala iqhina elomeleleyo apho kukho imilinganiselo enjalo ebalulekileyo. njengokuthenjwa, intlonipho okanye uthando. Konke oku kubangela ukuba imvakalelo yolonwabo ifakwe kubudlelwane, into ebalulekileyo ukuba isibini sibe namandla kwaye sinyamezele nangona ixesha lihamba.
Uthando nothando kwisibini aluhambisani kwaphela nokungavisisani kwimibandela eyahlukahlukeneyo. Kuyimpilo ukuba ubudlelwane bugcine izikhundla ezichaseneyo amaxesha ngamaxesha. Oku kubalulekile xa isibini sinokukhula kwaye somelele.
Ubuhlobo phakathi kwesibini buyinto yokwenene xa iqela ngalinye lisamkela elinye njengoko linjalo. Akulungile ukuba iqabane lizame ukwenza ukuba iimvakalelo zomnye umntu zingasebenzi kwaye zama ukunyanzelisa indlela omawucinge ngayo.
Akuyomfuneko ukugxeka isibini ngeempazamo esizenzayo. Ubuhlobo bubakho kwisibini xa bobabini abantu begxininisa ngamaxesha onke ekufumaneni izicombululo kwiingxaki ezinokuvela. Akuncedi ukugxeka iqabane.
Inkululeko yenye yezinto eziphambili xa kufikwa ekwenzeni isibini sibe ngoyena mhlobo usenyongweni. Iqela ngalinye kubudlelwane kufuneka lihloniphe elinye kwaye shiya indawo eyaneleyo ukuze wenze ngendlela ekhululekileyo.
Isibini esinabo ubuhlobo siyayazi indlela yokusebenzisana njengeqela. Iingxaki zixoxwa macala kwaye ezona zigqibo zifanelekileyo zenziwe.
Eyona nto iphambili ngamaxesha onke sisibini. Eyona nto ibalulekileyo kukumnceda xa eyifuna nokwazi ukuba akayedwanga xa kufikelelwa ekucombululeni iingxaki ezahlukahlukeneyo ezinokuvela.
Zimbalwa izinto ezivuyisayo kobu bomi kunokuba nezicwangciso zekamva neqabane lakho. Misela iinjongo zexesha elide kunye neenjongo luphawu olucacileyo lokuba esi sibini ngumhlobo wethu osenyongweni.
Ukukwazi ukuhleka kunye nokukwazi ukonwabela izinto ezahlukeneyo zokuzonwabisa ezifanayo yinto egcwalisa isibini ngolonwabo kunye ibenza abahlobo abasenyongweni. Ulonwabo oludibeneyo ludala ubudlelwane obumangalisayo phakathi kwabantu ababini ekunzima ukuqhawuka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Ungazi njani ukuba iqabane lakho likwangumhlobo wakho osenyongweni
Yintoni i-toxoplasmosis kwaye ichaphazela njani ukukhulelwa?
Iingxaki ze-acne? Ukutya okufuneka uphephe